.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Idiots - လူအဂီတ Album
Idiots - လူအဂီတ Album
Rock သီချင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Idiots အဖွဲ့ရဲ့ လူအဂီတ Album လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်နိုင်သလို ဒေါင်းယူလို့လည်း ရပြီဖြစ်ကြောင်း။
1 ငါ့ဘ၀ပြန်ယူ Click Here !! 1.90 MB
2 ချန်ခဲ့ Click Here !! 2.00 MB
3 မင်းနဲ့နီးဖို့ Click Here !! 2.00 MB
4 အတု Click Here !! 1.30 MB
5 နေရစ်ခဲ့တော့ Click Here !! 2.00 MB
6 မထိုက်တန်တဲ့အလင်း Click Here !! 1.90 MB
7 အသက်ငွေ့ငွေ့ Click Here !! 2.00 MB
8 ဆုလာဘ် Click Here !! 1.40 MB
9 အဓိပ္ပါယ် Click Here !! 2.00 MB
10 မင်းအတွက်မင်း Click Here !! 1.90 MB
11 ထပ်မမေ့နဲ့တော့ Click Here !! 2.10 MB
12 တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ် Click Here !! 2.10 MB
Posted by Thurainlin at 03:40